TOGETHER WITH YOU(Steembounty) - သင် စေညွှန်းရာ သင်နှင့် အတူ - Week #13 (@aggamun) — Steemit
TOGETHER WITH YOU(Steembounty) - သင် စေညွှန်းရာ သင်နှင့် အတူ - Week #13 (@aggamun)
aggamun (59) in msu •3months ago
msu myanmar steem-bounty kryptonia steembounty
3 months ago by aggamun (59)
steem-bounty (69) ·3months ago
@honeylay2001 has earned 0.3 STEEM. 0.3 STEEM from the creator of the bounty!
@mmunited has earned 0.3 STEEM. 0.3 STEEM from the creator of the bounty!
@hnineikhaing has earned 0.3 STEEM. 0.3 STEEM from the creator of the bounty!
honeylay2001 (43) ·3months ago
hnineikhaing (51) ·3months ago (edited)
bountyကိုသတိထားနေတဲ့ကြားကမေ့ဖြစ်အောင်မေ့တယ်။သတိရလို့စာတွေလိုက်ဖတ်တာ ဒီpostလေးကိုဖတ်ပြီးပြီလားမသိပေမယ့် မဖတ်ရသေးရင်ထပ်ဖတ်လိုက်ပါ။ဖတ်ပြီးရင်လည်း ထပ်ဖတ်လိုက်ပါ။အကျိုးရှိမှာပါ@honeylay2001
aggamun (59) ·3months ago
အဟမ်း အဟမ်း ဝရုန်းသုံးကားတွေ တွေနေရတယ်နော် ဟင်း ဟင်း
hnineikhaing (51) ·3months ago
ဒီနေ့ ဖတ်ရတဲ့ ပိုစ့်တွေထဲက ကျွန်တော်မသိ ဆိုတဲ့ပိုစ့်ကို သဘောကျမိပါတယ်။ ကို @minsoenaing ရေးထားတာပါ။
အဲဒီ ပိုစ့်လေးက သူမသိတဲ့ အကြောင်းတွေကို ရေးထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်လဲ သူပြောတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို မသိဘူးဗျ။ ကျွန်တော်သိတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အတော်ကို နောက်ကျကျန်နေခဲ့ပြီ ဆိုတာပါပဲ။ ဒီစာကို အစားတစ်လိုင်း @mamamyanmar ကိုဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ် ဘဒို။ ဒီလို ပိုစ့် မျိုး ကျွန်တော်လည်း ရေးဖူးတယ်။ timeets မှာလေ။ settingချိန်တာလွဲ သွားတော့ steemmit ပေါ် မရောက်လာဘူး။